Exchange zvazvingava Paundi wakanaka (GBP) Kuti US dhora (USD) kugara Forex Exchange musika
Forex Exchange updated: 29/06/2022 20:23
Paundi wakanaka kuti Dollar mutengo izvozvi pamusoro Forex Exchange pamusika pane 29 Chikumi 2022
20:23:23 (Forex zvazvingava update muna 59 seconds)
Forex - ndiyo huru yekutsinhana musika. Online kuchinjanisa kuchinjanisa uye inogara ichichinja kubva Forex kuchinjanisa. Nguva yekutsanya ye paundi wakanaka kusvika ku US dhora chiyero. Online rate shanduko paminiti, awa, vhiki, mwedzi.
Forex wokutengesera chati US dhora - Paundi wakanaka kurarama, 29 Chikumi 2022
Forex wokutengesera chati paundi wakanaka Kuti US dhora kurarama, 29 Chikumi 2022
Chati ye paundi wakanaka kusvika US dhora chiyero chekutsinhana pa 29 Chikumi 2022 iri pano, pane yedu webhusaiti. Pane chati, iwe unokurumidza kuona kukwira kana kudonha kwemari. Shandisa mbeva kusarudza iyo chaiyo nguva pane chati uye tsvaga iyo paundi wakanaka mwero wekutsinhana pane Forex panguva ino. Grafu yekutsinhana inongoerekana yachinja pamasekonzi 30 ega ega.
Pindura Paundi wakanaka Kuti US dhora Paundi wakanaka Kuti US dhora Exchange zvazvingava Paundi wakanaka Kuti US dhora Gengi nhoroondo
Online zvokutengeserana paundi wakanaka (GBP) kuti US dhora pari zvino
Miniti yega yega isu tinotsvaga iyo paundi wakanaka kusvika ku US dhora mwero wekutsinhana. Shanduko shomai mu paundi wakanaka kusvika ku US dhora - 0.0001 USD. Nhoroondo yemari yekutsinhana mumaminetsi ekupedzisira inoratidzwa mune tafura. Kutumira kuri nyore kwemashoko padanho reminiti pane saiti.
Online zvokutengeserana paundi wakanaka (GBP) kuti US dhora yokupedzisira awa wokutengesera
Mari yekuchinja neawa pane yedu webhusaiti. Kudonha kwa paundi wakanaka ( GBP) kusvika US dhora panguva ino - -0.0002 USD. Iyo tafura inoratidza paundi wakanaka kusvika US dhora maawa pese paawa. Iko kukosha kwe paundi wakanaka paawa yakaiswa patafura kuitira kuti zvive nyore kuona mutsauko.
Online zvokutengeserana paundi wakanaka (GBP) kuti US dhora yanhasi kuitika 29 Chikumi 2022
20:23 19:23 18:23 17:23 16:23 15:23 14:23 13:22 12:22 11:22